15 zavatra mahagaga TSA ahafahana mivezivezy any amin'ny seranam-piaramanidina
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 19 novambra 2001, taorian'ireo fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 9/11, ny iraka fitantanana ny Fiarovana misahana ny Fiarovana dia "mba hiarovana ny rafitra fitaterana firenena mba hiantohana ny fahalalahan'ny hetsika ho an'ny vahoaka sy ny varotra."
Ny ankamaroan'ny olona dia efa mahazatra ny fahafahana misafidy rehefa mandalo amin'ny toeram-pisakafoanana seranam-piaramanidina izy ireo. Ny mpitandro filaminana misahana ny fitaterana dia miantoka ny fiarovana ny mpandeha, izay miantoka fa ny entana voarara dia tsy mamerina ny toeran'ny toeram-pisavana.
Ny zavatra sasany - toy ny basy (real or replica), siramamy lehibe sy liquids entrée - dia tsy mahazo alalana. Saingy mbola manohy ny fanovana ny sampan-draharaham-pirenena raha ny mikasika ny inona no afaka mandalo ny toeram-pisavana.
Ireto ambany ireto ny zavatra mahagaga 15 izay azonao atao amin'ny faran'ny toeram-pisavana. Raha mbola misy fanontaniana ihany anefa, dia azonao atao ny maka sary ny entana ary alefaso amin'ny AskTSA ao amin'ny Facebook Messenger na amin'ny Twitter. Ny mpiasa dia an-tserasera valiny amin'ny 8 ora hatramin'ny 10 alina sy amin'ny herinandro ary amin'ny 9 ka hatramin'ny 19 alina amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra.
TSA dia mitazona zava-pisotro misy alikaola eo anelanelan'ny 24 isan-jato fa tsy mihoatra ny 70 isan-jato toy ny rano hafa. Ny tavoahangy dia tsy maintsy afindrana, tokony 3,4 na sivifolo na latsaka ary tafiditra ao anaty kitapo efa-bolana. Fa ny fepetra FAA dia mandrara ny mpizahatany tsy hisotro ny alikaola raha tsy ampiasain'ny mpandeha iray.
Mpanafika sy taolana
TSA dia manome toro-hevitra fa ireo mpandeha izay te-hanatontosa ireo zavatra ireo dia tokony hanamarina amin'ny seranam-piaramanidina ataon'izy ireo mba hahazoana antoka fa ireo zavatra ireo dia mety amin'ny sezary na ao anaty ala. Ankoatra izany, ny rindrankajy dia apetraka ao anaty tahony ambony, ka tsy misy olona maratra rehefa manokatra ny vata.
Baby Formula, tavy miloko sy sokatra
Ny zavatra telo rehetra dia avela amin'ny "saram-pitsaboana" ao amin'ny kitapo mitondra mpandeha, na TSA aza tsy mamaritra ny fomba hamaritana ny atao hoe mahay mandanjalanja. Ireo zavatra ireo dia tsy maintsy nesorina sy nakarina manokana. Ary ny ray aman-dreny dia tsy mila manana ankizy miaraka aminy mba hitondra rononon-jaza mialoha ny toeram-pisavana.
Raha toa ka tsy manana tsiran-tsolika ireo faritra ireo, dia azo afangaro amin'ny kitapo entina. Saingy ny TSA dia manoro hevitra fa ny mpandeha dia miantso ny seranam-piaramanidina mba hahazoana antoka fa ny ampahany dia tafiditra ao anaty harona ambony na ambany seza.
CO2 Cartridge ho an'ny Life Vest
Ny mpandeha dia avela hitondra fiara miaina miaraka aminà cartridges roa eo ho eo ao anatiny, miaraka amin'ny kisarisary roa, ao anaty kitapo entina. Fa azo atao fampitandremana: ny mpandeha dia tsy maintsy mandalo fitsitsiana faharoa ary mety ho voarara izany raha toa ka manaisotra fanairana mandritra ny fitiliana.
Sakafo, voankazo ary legioma (tsy misy liquide)
Ireo zavatra ireo dia avela amin'ny kitapo mitondra kitapo, fa averina indray: mamantatra amin'ny serivisy mba hahazoana antoka fa ny singa dia mety ao anaty fiara-bary na eo ambany seza. Ary ny mpandeha dia tokony ho azo antoka fa izay rehetra ampiasainy mba hitazonana ny sakafo mangatsiaka dia ankatoavin'ny TSA handalo ny toeram-pisavana misahana ny fandriam-pahalemana, anisan'izany ny gara sy gasy.
Kofehy / kiraro fanjaitra
Na dia mety ho fitaovam-piadiana toy ny fitaovam-piadiana aza ny TSA dia mamela ireo zavatra roa ireo amin'ny kitapo entina. dia manoro hevitra ny mpandeha mba hiantohana ny fanjaitra na hanakosana ny fanjaitra rehefa tsy ampiasaina.
Disposable / Zippo Fighters
Tamin'ny taona 2005, nanapa-kevitra ny handrara ny jiro sigara amin'ny fiaramanidina ny TSA. Roa taona taty aoriana, namerina izany fanapahan-kevitra izany izy, izay nahafahan'ireo mpandeha nitatitra ny jiro tao anaty kitapo entina. Fa ny afo sy ny jiro bitika dia mbola tsy zakan'ny fiarovana. Ary ny alim-bary amin'ny solika dia tsy avela amin'ny kitapo voatahiry raha tsy voafatotra amin'ny tranga DOT.
TSA ahafahan'ireo mpandeha handefa kitapo-battera eCigarettes, vaporizers, vape pens, mpamindra fo ary mpamatsy elektronika elektronika ao anaty kitapo mitondra kitapo. Saingy nanoro hevitra ny hanao antso an-taribia izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy manana ny fetrany manokana amin'ireo fitaovana ireo. Ary tsy afaka ampiasaina izy ireo eo am-piandohan'ny fiaramanidina hanarahana ny fitsipika momba ny fifohana sigara ataon'ny FAA.
EpiPens / Inhalers / ranon-javatra / Gels
Ny TSA dia hanafoana ny fitsipi-pamokarana fitondràna 3.4-ounce amin'ny onjam-panafody ho an'ny liquids, giles, ary ny aerosols ilaina amin'ny medial. Izy ireo dia tsy maintsy ambara amin'ny TSOs amin'ny fanaraha-maso ny tanana, ary ny dingana dia manampy raha nosoratana ny fanafody.
Ny akorandriaka Shell dia metaly manasongadina bala. Azo alaina ao anaty kitapo ny tranondran-tseranana raha mbola tsy voakilasy ilay tetikasa na ny fonosana na nesorina na nesorina.
Ny mpihaza dia afaka mitondra ny bao. Saingy tokony hanara-maso amin'ny serivisy izy ireo mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fetran-tsasatra izy io ary mifangaro ao anaty bodofotsy.
Ny TSA dia mitaky ny famindrana azy ireo ao anaty fitoeram-balafomanga mazava, plastika, fitrandrahana. Ny TSO dia hanara-maso akaiky ny crustacean amin'ny toeran'ny fiarovana, ary ny sampana dia manoro hevitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny zotram-piaramanidina momba ny politikam-pandehandehanana.
TSA dia niteraka resa-be avy amin'ny mpanjifa niaraka tamin'ny ankizy saro-pady tamin'ny taona 2011 taorian'ny fandraràna ireo globe feno ranomandry. Azo alaina ao anaty kitapo entana izy ireo - fa raha tsy manaraka ny fitsipika 3.4-ounce amin'ny alàlan'ny serivisy ary mifanaraka amin'ny kitapo efa-bolana.
Mampiasa siramamy tsy fantatra
Ny mpandeha dia avela hampiasa siramamy ao anaty kitapo entiny raha mbola apetraka ao anaty fitoeran-tsoavam-basy na sarona hafa mitovy amin'ny sarotra. Afaka mitondra siramamy tsy ampiasana azy izy ireo rehefa miaraka amin'ny fanafody mandoza. Ireo zavatra roa ireo dia tsy maintsy ambara amin'ny mpiambina amin'ny sehatra eo amin'ny toeran'ny tosika. Ny fanafody misy labels dia hanampy amin'ny fanamorana ny fizotry ny fisavana.
Inona avy ireo fiaramanidina manana scanner feno?
Airlines and Flights Between Britain and the Caribbean
Ny anaran'ny Pricelin-Modely ho anao ho an'ny Budget Travel
Sidina fitateram-piaramanidina ambany sarany ambany
Hotely sy Airlines dia te-hividy mivantana avy amin'izy ireo
Ahoana ny fangatahana fanampiana vonjimaika
Fomba handehanana mivezivezy amin'ny fiaramanidina rehefa mandalo
City Parks any Oklahoma City
Mandeha any Antarktika avy any Cape Town, Afrika Atsimo
Barcelona mankany Alicante amin'ny Train, Bus, ary Car
Tranombakoky ny fanitarana ny Andrefana eo ambanin'ny vavahady Arch
Ocean City, MD Fireworks: 2016 Calendar of Events
Phipps Conservatory sy Botanical Gardens
Great Drives - Cambridge mankany Londres
Tetikasam-bola fandoavam-bola isan-taona fandaharam-potoan'ny Park Theme
Fihetsiketsika androany tao Texas
24 ora fiarakodia any Albuquerque